Myanmar Defence Weapons: Kamaz-43269 ရုရှားသံချပ်ကာကား
Kamaz-43269 သံချပ်ကာယာဉ်အား Kama Automobile plant မှထုတ်လုပ်ခဲ.ရာ Mustang ကားအုပ်စု၏ ကိုယ်ထည်ကိုသုံးကာ ဘီးကို ၄ဘီးမောင်းအဖြစ် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း ကာကွယ်ေ၇းဝန်ကြီးဌါန၏ အမှာစာအရ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။သံချပ်ကာကားတွင် ကျည်ကာသံကိုယ်ထည်အဆင့် ၅(အေ) တပ်ဆင်ထားပြီး ယာဉ်ဝန်းထမ်း ၂ဦးအတွက် လုံလောက်သော သီးသန့်နေရာနှင့် လိုက်ပါသူဂဦး အတွက် သီးသန့်နေရပါရှိပြီး တံခါး၂ခုနှင့်အပေါ်မှဖွင့်နိုင်သည့်အပေါက်၂ခုပါရှိသည်။သံချပ်ကာကား၏အလေးချိန်မှာ ၁၂တန်ရှိပြီး ကုန်၂.၅ တန်တင်နိုင်သည်။မြင်းကောင်ေ၇၂၄၀ အားရှိ ဒီဇယ်အင်ဂျင်တပ်ဆင်ထားပြီး အမြန်ဆုံးနှုန်း ၁နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ၉၀ဖြင့်သွားလားနိုင်သည်။သံချပ်ကာကားသစ်သည်အလွန်အားကိုရပြီး
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။ရုရှားတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ပြုပြင်ရေးဌါန၁၂၄ခု ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
ရုရှားနိုင်ငံ၏ နယ်ခြားတပ်ဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ပြည့်စုံစွာ စမ်းသပ်ခဲ့၇ာ အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
Posted by MM at 2:34 AM
အောင်ဇေယျ အမျိုးစား ပဲ့ထိန်းဒုံးပါ ဖရီးဂိတ်များ
မြန်မာ့တပ်မတော်ရေ ၅၅၁ အမျိုးစား လေယာဉ်ပစ်သေနတ်ပါ သ...
ဘင်္ဂလားဒေ. ရဲ. တပ်မတော်နည်းပညာ
မြန်မာ့အမြောက်တပ် M1985 MLRS
မြန်မာအမြောက်တပ် Nora B-52 Self-propelled Howitzer...
မြန်မာ့ရေတပ် ၇၇၁ ကော်ဗတ်များ
မြန်မာ့ရေတပ် ၅၅၆ နှင်. ဘင်္ဂလားဒေ့ ဖရီးဂိတ်များ
Myanmar Military Trucks
What is it this type?
Destroyer Guangzhou & Frigate Chaohu Visit in Myan...